चर्चामा पश्चिमेली थेगोले भरिएको तीज गीत ‘मिर्मिजालैमा’ – shubhabihani
Home / मनोरंजन / चर्चामा पश्चिमेली थेगोले भरिएको तीज गीत ‘मिर्मिजालैमा’
चर्चामा पश्चिमेली थेगोले भरिएको तीज गीत ‘मिर्मिजालैमा’
Posted by: admin in मनोरंजन August 19, 2016	Comments 250 Views
यो तीजमा रट्टै
भाइ आएमा चट्टै माइत जाने मन छ
पोहोर साल रट्टै गइन मत चट्टै
आएन भाइ लिन
तीजलाई लक्षित गरेर सुमन सागरजंग केसीले ल्याएको गीत हो यो । उनको गीतको नाम ‘मिर्मिजालैमा’ दिएका छन् । विगत केही वर्षदेखी तीजको गीत गाउने क्रममा देखेका विकृतिको कारण अवाक भएर आफूले यस्तो गीत निकालेको उनको भनाइ छ ।
सुमन भन्छन्, ‘गीत भनेको सभ्य, शिष्ट र सांस्कृतिक पहिचान बोकेको हुनुपर्छ । तर आजकालका गीतहरु मनपरी भएकाछन् ।’ त्यस्तै, तीजका गीत यसरी पनि गाउँन सकिन्छ है भन्ने खालको सन्देश दिनलाई पनि आफूले यो गीत ल्याएको उनको तर्क छ ।
उनले रट्टै, चट्टै पश्चिमा थेगो लगाएर तीजको गीत गाएकाछन् । यो गीतमा परम्परागत पश्चिमको थेगोहरु लगाएको केसीले बताए । ‘हामीसँग निकै राम्रा संस्कृतिछन्, राम्रा कुराको अनुसरण गर्नुपर्छ । राम्रा कुरालाई स्थान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले पहिला नै लोक गीत, कमेडी गीत, पप गीत गाइसकेका छन् । तीज गीत भने उनको पहीलो हो । गीतमा उनलाई टीका पुनले साथ दिएकी छन् भने शब्द शान्ता पन्थीले दिएकी हुन् । लय भने चिरन्जिवी अर्थालले दिएका हुन् ।
वी मानव आर्ट स्टुडियोको संचालक रेहका केसीको गीतको भिडियोमा आमा समूहका कलाकारले अभिनय गरेकाछन् ।
Previous: ‘कर्के नजर’ले हेरेको निहुँमा कपनमा युवतीको ‘ग्याङ फाइट’ ! फिल्मी स्टाइलमा एक युवतीमाथि तीन युवतीको आक्रमण
Next: प्रम दाहालको चलाखीपूर्ण निर्णय : ‘हर्टअट्याक’ भएर मृत्यु भएकालाई पनि सहिद घोषणा, पीडित परिवार मर्कामा !
‘पशुपति प्रसाद, कालो पोथी र को आफ्नो’को त्रिपक्षिय भिडन्तबाट चलचित्र ‘कालो पोथी’ विश्वकै प्रसिद्ध ‘अस्कर ...